स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, २० भदौ २०७५) | गृहपृष्ठ
Home Uncategorized स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, २० भदौ २०७५)
on: September 05, 2018 Uncategorized
स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, २० भदौ २०७५)
वि.सं. २०६६ साल पुस १ गतेदेखि लघुवित्तसम्बन्धी कारोबार गर्दै आएको स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले हाल २५ जिल्लामा ५६ ओटा शाखा कार्यालयमार्फत ६० हजार ७ सय २९ जना महिलाहरूलाई सदस्य बनाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ । कारोबार सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सोही वर्ष मङ्सिर १६ मा स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । कम्पनीले आगामी वर्ष सदस्यहरूको सङ्ख्या वृद्धि गरी ९३ हजार १ सय ३५ पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्ममा रू. ३५ करोड ४६ लाख ४ हजार चुक्तापूँजी पुर्‍याउने प्रक्षेपण कम्पनीले गरेको छ । सोही वर्ष रू. ५ करोड ५५ लाख ६४ हजार नाफा कमाउने प्रक्षेपित अनुमानसमेत कम्पनीको छ । प्रक्षेपणअनुसार चुक्तापूँजी वृद्धि गर्न साउन १३ देखि भदौ १७ गतेसम्मका लागि हाल कायम चुक्तापूँजीको सय प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गरिरहेको यस कम्पनीले गतवर्षको नाफाबाट लगानीकर्ताहरूलाई २० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनार्थ १ दशमलव ०५३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित बोनस शेयर हकप्रद शेयरले नपाउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । हाल रू. १२ करोड २४ लाख ९७ हजार रहेको कम्पनीको चुक्तापूँजी हकप्रद र बोनसपश्चात् रू. २६ करोडभन्दा बढी हुनेछ । हाल जारी हकप्रदपश्चात् कम्पनीको शेयर स्वामित्व संस्थापकतर्फ ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणतर्फ ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको जगेडा कोष रकम रू. ६ करोड ६४ लाख ६८ हजार छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा जगेडा कोष १ सय १७ प्रतिशत बढेको छ । चौथो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ३ करोड ६५ लाख ८७ हजार नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीले करीब २९ प्रतिशत बढी नाफा आर्जन गरेको हो । गत चौथो त्रैमासमा अघिल्लो वर्षभन्दा ९३ प्रतिशत खराब कर्जा उठाएकाले पनि नाफा बढ्न सहयोग मिलेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको चौथो त्रैमासमा रू. २४ लाख २१ हजार खराब कर्जा उठाएको कम्पनीले गतवर्ष सोही अवधिमा रू. ४६ लाख ७७ हजार खराब कर्जा उठाएको हो ।
कम्पनीको चालू आवको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दा :
गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ७८ करोड २३ लाख ५६ हजार निक्षेप सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै, रू. १० लाख १० हजार लगानीमा रहेको कम्पनीले रू. २ अर्ब १३ करोड २३ लाख ५ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा निक्षेप ६४ र कर्जा प्रवाह ६७ प्रतिशत बढेको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा करीब ८१ प्रतिशत बढाएर रू. २९ करोड ९७ लाख ८९ हजार ब्याज आम्दानी गरेको कम्पनीले रू. १७ करोड ३० लाख ३७ हजार ब्याजमा खर्चिएको छ । ब्याज खर्च अघिल्लो वर्षभन्दा १ सय ३९ प्रतिशत बढी भएको हो ।
कुल सञ्चालन खर्च रू. ३ करोड ९८ लाख ५९ हजार गरेको कम्पनीले अघिल्लो वर्षभन्दा साढे ७७ प्रतिशत बढी रू. ५ करोड ९१ लाख ३६ हजार कर्मचारीका लागि खर्चिएको छ ।
कम्पनीको स्थिर सम्पत्ति रू. ३ करोड १७ लाख ३८ हजार र अन्य सम्पत्ति रू. ४ करोड २२ लाख ६७ हजार पुगेको छ ।
पूँजीकोष लागत ९ दशमलव ९८ प्रतिशत छ भने पूँजीकोष पर्याप्तता ९ दशमलव ९७ छ ।
चौथो त्रैमासमा शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा रहेको कम्पनीले सम्भावित जोखीम शीर्षकमा रू. १ करोड ६७ लाख ८१ हजार छुट्याएको छ । अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा उक्त शीर्षकमा रू. ९८ लाख ६४ हजार छुट्याएको थियो । सम्भावित जोखीम शीर्षकमा अघिल्लो वर्षभन्दा ७० प्रतिशत बढी रकम छुट्याइएको हो ।
चौथो त्रैमासमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. २९ दशमलव ८६, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. २ हजार ५२ दशमलव ५४, मूल्य आम्दानी अनुपात २८ दशमलव ९६ प्रतिशत, तरलता अनुपात १३ दशमलव ९८ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ५४ दशमलव २५ छ । मङ्गलवार कम्पनीको शेयर कारोबारमा अन्तिम मूल्य रू. ८ सय कायम भएको छ ।
मैनबत्ती विश्लेषण : कम्पनीको ६५ दिनको कारोबार अवधिमा अन्तिम दिन कालो मैनबत्ती बनेको छ । यस्तो आकृतिले कम्पनीको शेयरमूल्य घट्ने सङ्केत गर्छ ।
आरएसआई : कम्पनीको ६५ दिनको कारोबारमा आरएसआई न्युट्रल जोन (४१ दशमलव ५५ स्केल)मा छ । यसले शेयर खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन : कम्पनीको ६५ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन १० दशमलव ४० विन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य छ ।
मुभिङ एभरेज : कम्पनीको ६५ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग नजिकिएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने औसत मूल्यरेखासँग जोडिएको छ भने २६ दिने मूल्यरेखाभन्दा माथि छ । हालको मूल्य रू. ८ सयदेखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू. ८ सय १९ मा प्रतिरोध र मूल्य सस्तिएमा रू. ७ सय ८० मा टेवा पाउने देखिन्छ ।
स्वदेशी लघुवित्तको नेप्सेमा कारोबार खुला
स्वरोजगार लघुवित्तको हकप्रद बाँडफाँट
स्वरोजगार लघुवित्तको मूल्य समायोजन
स्वरोजगार लघुवित्तको सीईओको राजिनामा स्वीकृत